Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo siidaysay inka badan kun maxbuus – Radio Daljir
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo siidaysay inka badan kun maxbuus
Febraayo 22, 2018 8:09 b 0
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xabsiga ka siidaysay inka badan kun maxbuus oo ku jiray xabsi ku yaala magaalada Jigjiga ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Siidayntan ayaa timid wadahadalo dalka Kenya ku dhexmaray dowladda dhexe ee Itoobiya iyo jamhadda ONLF ee ka dagaalanta Ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ee dagaalka ku jira inka badan sodon sano.
Maxaabiistan ayaa ku jiray xabsiga Jeel Ogaadeen ee magaalada Jigjiga, waxaana dadkan loo xiray arimo la xiriira jamhadda ONLF inay katirsanaayeen, jamhadda ayaa u dagaalanta sidii ay gooni isu taag uga heli lahayd dowladda dhexe ee Itoobiya.
Raysal wasaarihii dalka Itoobiya Hela Mariam Deselighn ayaa todobaadkii hore iska casilay xilka, kadib rabshadaha dalkaasi ka socday, waxaana ilaa iyo hadda jirin cid lagu badalay xilkii uu ka degay.
Laba qof oo shacab ah oo lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir